Haddii aad naafo tihid waxaad heli kartaa taageero iyo caawimaad marka aad shaqo raadineysid ama marka aad goob shaqo ku cusubtihid. Qof taageero kuu ah ayaa kaa caawinaya hawlaha shaqada iyo wixii kale ee loo baahanyahay si aad shaqo u heshid.
Taageeradu waa mid qof kasta u gooni ah, waxaan la siinayaa qof taageero ah oo ku xeel dheer habka isbaridda, waxa loogu yeero SIUS-konsulent. Qofka taageerada ah waxaa laguugu soo xirayaa marka aad shaqo raadineysid, wuxuuna tusaale ahaan kaa caawin karyaa in aad xiriir la sameysid shaqabixiyayaal kala duduwan. Waxaad sidoo kale shaqo heli kartaa haddii aad shaqo heshid ama tababar shaqo si aad u baratid goobta shaqada. Qofka taageerada ah wuxuu kaa caawinayaa isbarashada goobta shaqada, wuxuuna mas’uul ka yahay in aad heshid taageeradi aad ku wada heshiiseen. Waxay taasi mararka qaarkood ka dhignaan kartaa in qofka taageerada ah uu intii waqti ah kaa dhinac shaqeynayo. Taageerada si tartiib-tartiib ah ayaa hoos loogu dhigayaa, gebi ahaanna waa la goynayaa marka aad si madax bannaan hawlahaaga shaqo u qabsatid.
Taageeradu waxay ka koobantahay laba qeybood:
Taageero isbarid, oo aad heli kartid ugu badnaan 6 bilood.
Taageero dib u eegis, oo aad heli kartid ugu yaraan 1 sano ka dib marka aad shaqadaada billawdid.
Qof taageero oo gaar ah oo loogu tala galay taageero isbarid- iyo dib u eegis waxaa loogu tala galay adigaaga qaba naafanimada, taageerana ugu bahaan xagga shaqada. Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid.
Waa annaga cidda qiimeyneysa in qofka gaarka ah ee taageerada ah ee loogu tala galay taageerada isbaridda- iyo dib u eegistu uu yahay mid habboon.
Waxaan eegeynaa hawlaha shaqo ee ay wuxu ku saabsanyihiin iyo taageerada loo baahnaan karo tan ay tahay. Waxaan dabadeed qaabka ay wax u dhacayaan kaala gaareynaa heshiis.
Waxaan hubineynaa in aad la xiriirtid qof la taliye xagga bulshada ah SIUS-konsulent iyo in markaas ka bacdi ay wada shaqeyntu billaaban karto.
Waxaannu si wadajir ah heshiis ula gaareynaa adiga, shaqabixiyaha iyo qof taageero ah. Waxaa heshiiskaas ku jiraya qaabka aan u dhigeyno isbaridda iyo ilaa inta uu baaxad ahaan ahaanayo.
Inta shaqaaleysiinta ka hor lagu jiro waqtiga isbaridda waxaad heleysaa isla lacagti aad qaadan jirtay marki aad shaqadoonka ahayd.
Inta aad joogtid goobta shaqada waxaad ku jirtaa ceymis loogu tala galay wixii dhaawac ah ee laga yaabo in ay jiraan.